Nitrangana fanafihan-dahalo mantsy tao amin’ny fokontany Ankerana, kaominina Sadabe, distrikan’i Manjakandriana, 6 no omby very tamin’izay. Ny alin’ny alahady teo sahabo tamin’ny 10 ora, taorian’ny fandresen’ny Barea ka mbola nampifaly ny ankamaroan’ny Malagasy no nitrangan’ny halatra omby. Raha nahatsikaritra ireo tompon’omby fa nisy nanao latsak’alina tao ny biby fiompin’izy ireo dia nampilaza ny zandary tao Sadabe avy hatrany. Tsy niandry ela ny mpitandro filaminana fa avy dia namonjy ny lasibatra. Nanara-dia hatrany koa ireo fokonolona sy ny zandary ka omby roa no avotra teny an-dalana. Ny efatra hafa kosa tsy tazana, heverina fa nosarahan’ireo malaso ny lalany. Araka ny fampitam-baovaon’ny tany an-toerana, tamin’ny fotoana nandresen’ny Barea izay mbola nampisebiseby ireo mponina no nanararaotan’ireo dahalo ny famoahana ireo omby. Ny borigadin’ny zandariamariam-pirenena ao Sadabe no mandray an-tanana ny tohin’ny raharaha. Tsy ny tsy fandriampahalemana ihany no saron’ny baolina kitra fa hatramin’ny raharaham-pirenena.